PC Accessories – ICT.com.mm
Huawei Classic BackPackK114,000
Dell Urban 15.6" Topload-3K31,313
Hoco PH25 Wavy iPad Special Stylus (White)-29K58,166
Hoco PH26 Streamer Flat Universal Stylus (White)-29K48,313
Wacom Pro Pen2Felt Nibs 10 Packs WA-ACK-222-13-ZK18,000
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Applicable laptop size: 14 inches and under Minimalist Design Inspired by the symmetric and refined style of Parisian architects, the backpack's integrated design is effortlessly stylish, and...
Dell Urban 15.6" Topload-3
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Product Type: Notebook carrying case Color: Asphalt Product Material: Treated fabric Dimensions (WxDxH): 16.3 in x 3.4 in x 12.6 in Weight: 1.23 lbs Notebook Compatibility: 15.6"...
Hoco PH25 Wavy iPad Special Stylus (White)-29
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Material: aluminum alloy + ABS Nib: 1.0mm. Size: 166.5*φ9.5mm Weight: 16.4g Process: oxidation + baking finish Battery: 140mAh Charging interface: Type-C Use time: 20 hours. Standby time:...
Hoco PH26 Streamer Flat Universal Stylus (White)-29
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Material: aluminum alloy + ABS Nib: 1.5mm. Length: 168*φ8.90mm Weight: 14.5g Process: oxidation + baking finish Battery: 140mAh Charging interface: Micro-USB Use time: 30 hours. Standby time:...
ASUS C21N1509 Laptop Battery-4
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Rechargeable Li-Polymer Battery Pack Voltage: 7.6V Capacity: 38Wh Compatible with asus laptop Warranty: 1 Year
ASUS PEN (Silver)-9
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Power Up to 10months battery life AAAA Battery 1024 pressure sensitive Clip-on design with two buttons for eraser and right click function Material Premium Aluminum Texture Dimensions:...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Color: Black Computer Compatibility Dimensions: 37 x4x 26 cm / 14.75” x 1.53” x 10.25” Dimensions: 32 x 17 x 46 cm 12.60” x 6.69”...
Targus 15.6-inch Element Backpack
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Color: Black Exterior Dimensions: 32 x 18 x 46 cm / 12.60” x 7.09” x 18.11” Dimensions: 37 x4x 26 cm / 14.75” x 1.53”...
Targus 15.6-inch Business Casual Slipcase
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Works With: 16″ Laptops and Unde Color: Black Style: Slipcase / Briefcase Protection Level: Good Weight: 0.92 lbs Dimensions: 16.00″ x 11.00″ x 1.13″ (W x H...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Input: AC100~240V, 50-60Hz, 1.5A Outputs: DC19 V / 3.42 A Watts: 65W Dimensions: 75*75*30.5mm DC Plug: Ø4.0mm Compatible Model (Plug@ ø4.0mm): UX21A,UX301LA,UX302LA/LG,/UX31A/LA,UX32A/UX32VD,UX42VS,UX50,UX52VS,1015U/E,S200 30W:1015E 33W: X102BA/MA,X200CA/LA 45W: UX302LA/TX201LA/UX302LA/LG,X202E,...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Type: Battery Charger Compatible: ProBook 440, G0, 440, G1, 440, G2 Notebook Type: Battery Charger Compatible: ProBook 440, G0, 440, G1, 440, G2 Notebook
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Great For LCD/TFT Screens Ideal For Computer, Laptop, LCD & Plasma TVs, Notebooks, Mobile Phones, Even Keyboards etc. Microfiber Cleaning Cloth Leaves A Streak Free Finish On...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။HP Laptop များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည့် HP 19.5V 4.62Ah Adapter (S.H)(Blue Tip) ဖြစ်ပါသည်။ Output: 19.5V , 4.62 Ah ဖြင့် အားသွင်းနိုင်ပါသည်။ မီးအားအသုံးပြုမှုမှာ 90W ဖြစ်ပါသည်။ Type: Battery Charger, Compatible Brand: HP, Output:...